MAHARENA TOKANTRANO ....
Maharena tokantrano, teny mamy nozaraina,
Ho an’ireo mpifamofo, izay vao vita mariazy.
Tsodrano nipololoatra, hotsaroana tsy sandaina ;
Satria manomboka eo, tsisy intsony ny ahy sy azy.
Maharena tokantrano, tsy mitaky zava-maro ;
Fa ny fikolokoloina hatrany, ilay fitiavana hateza.
Ka tsy ho sodokan’ny akanga, tia mifangaroaro ;
Fa hiezaka isan’andro, ny tsy mety aleo meteza.
Maharena tokantrano, mila fiezahan’ny rehetra ;
Tsy hitsabaka hitsikera, ity tokantrano vao niorina.
Mba hahatanteraka ilay voady, ka tena aina no fetra ;
Ka ireo mpivady vao, no tena hiezaka ny hanorina.
Maharena tokantrano, ho an’ireo mpivady vao.
Teny tsy mandeha ho azy, fa mifono hevi-dalina.
Hosaintsainina isan’andro, satria fiainam-baovao,
No aorina manomboka eto, ka ilaina tena malina.
Maharena tokantrano, eo ambany elatr’ilay Tsitoha ;
Ka hiadana sy ho ambinina, amin’izay rehetra hatao.
Aza hadino ny mivavaka, rehefa hatory na hifoha ;
Mba Jesoa no vatolampy, andrin’ny tokantranonao.